छालामा समस्या आउने वित्तिकै अस्पताल आउने बानी बसालौं : डा. प्रशन्न नापित
० छाला रोग भन्नाले कस्तो रोगलाई जनाउँछ ?
छाला रोग धेरै किसिमका हुन्छन् । नेपालको परिवेशमा छालामा हुने संक्रमण सबैभन्दा धेरै हुन्छ । जसमा भाइरल संक्रमण, व्याक्टेरिया संक्रमण, फङ्गल संक्रमण, परिजिवीको संक्रमणलगायतका संक्रमणहरुदेखि लिएर वंशाणुगत रोग त्यसपछि इमुलोजिकल डिजिज भन्छौं जसमा सोरासेस, इजिमा जस्तो रोगहरु छन् भने क्यान्सरदेखि लिएर विभिन्न रोगहरु छालामा हुन्छन् ।वास्तवमा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो अंग भनेको छाला हो । दुई मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल छाला हाम्रो शरीरमा हुन्छ । त्यसकारण सबैभन्दा बढी रोगहरु पनि छालामै देखिन्छ ।
० छालाको रोगमा कस्ता—कस्ता समस्याहरु देखिन्छ?
छालाको रोगमध्ये कुनैमा लक्षण देखिन्छ भने कुनै छालाको रोगको लक्षण देखिने हुँदैन । जस्तो दाद, कोठीे देखिने, दुख्ने, छालाको कलर चेन्ज हुने, चिलाउने भएको अवस्थामा चेकजाँच गर्न विरामीहरु आउने गर्छन् । जस्तो कुष्ठ रोगको लक्षणहरु खासै देखिँदैन । यसको लक्षण भनेको छालामा छाम्दा थाहा नहुनुका साथै तिखो बस्तुले घोच्दा पनि पत्तो नहुने हुन्छ ।
० छालामा कस्तो लक्षण देखिए गम्भीररुपमा लिनुपर्छ ?
छालासम्बन्धी रोगका कुरा गर्दा छालाको क्यान्सर जसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जसले शरीरको भित्री अंगलाई समेत हानी पु¥याउने काम गर्छ । जसले गर्दा छालाबाट ब्लीडिङ्ग हुने समस्याहरु आउने गर्छ, धमनीहरु देखिने ग¥यो भने वा शरीरका विभिन्न भागका छालामा निलडामहरु देखिने भयो भने ठूलै समस्या आउन सक्छ । त्यसबाहेक भित्री रोगहरु मृगौला सम्बन्धी रोग, कलेजो सम्बन्धी रोग, छाती सम्बन्धी रोग, सुगर रोग भयो भने पनि छालामा त्यसको लक्षण देखा पर्न सक्छ । त्यो हामीले पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणको लागि छालाको रोग भनेर त्यसै बस्यो, त्यो मृगौला रोगको लक्षण पनि हुन सक्छ । त्यसैले छालाको रोगलाई भित्री रोगको ऐना जस्तो ‘मिरर अफ इन्टर्नल डिजिज’ भनेर पनि पहिचान गर्न सकिन्छ ।
० भौगोलिक अवस्थाका कारणले पनि छालामा समस्याहरु देखा पर्न सक्छ ?
भौगोलिक र मौशम अनुसार पनि छालामा समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् । कुनै रोग गर्मी मौशममा लाग्ने हुन्छ भने कुनै रोग जाडो मौशममा लाग्ने हुन्छ । जस्तो घामको कारण एलर्जी हुने, पसिनाका कारणसंक्रमणहरुबाट हुने रोगहरु गर्मी महिनामा हुने गर्छ भने जाडो महिनामा जस्तो एसल्ली भन्ने गछौं जुन जाडो महिनामा चिसोका कारण औंलाहरु निलो हुँदै जाने त्यस्तो किसिमको समस्याहरु जाडो महिनामा देखिने गर्छ । अर्को भौगोलिक अवस्था अनुसार पनि छालाको रोगहरु फङ्गोलिक इन्फेक्सन ढुसी सम्बन्धी छालाका रोगहरु विशेष गरी धेरै तराईमा देख्न सकिन्छ । पहाडमा भने चिसोका कारण छालामा लाग्ने रोगहरु धेरै पाइन्छ । जस्तो काठमाडौं उपत्यका राजधानी भएकै कारण देशका सबै ठाउँमा मान्छेहरुको चाप भएका कारण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका छालाका विरामीहरु उपचारका लागि आउने गर्छन् । त्यसैले देशभरका छालाका रोगीहरुलाई हामीले उपचारका क्रममा हेर्ने मौका पाउँछौं ।
० छालामा कस्तो समस्या देखा परेपछि विरामीहरु उपचारका लागि आउने गर्छन् ?
छालाको रोगको विषयमा भन्ने हो भने धेरै छालाका रोगीहरु उपचारका लागि अस्पताल नआई यो सामान्य समस्या हो भनेर घरमै बसी घरायसी उपचार गर्छन् । कसैले फार्मेसीबाट आफूखुसी औषधी खरिद गरी उपचार गर्छन् । हामीसँग उपचारका लागि आइपुग्ने विरामी विशेष गरी छालामा रोग लागेको धेरै लामो समय भइसकेपछि घरायसी र अन्य माध्यमबाट उपचार गर्दा ठिक नभएपछि आउने गर्छन् । पछिल्लो समय भन्नुपर्दा समाचार सुनेर हुन्छकी, युटुबबाट हेरेर हुन्छ कि अहिले छालामा सामान्य समस्या देख्ने वित्तिकै छालासम्बन्धी चिकित्सकका मरामर्श र उपचारका लागि आउने क्रम बढ्दै आइरहेको छ । अहिले शरीरको सानो कोठी जस्तो खटिरा हुन्छ त्यसलाई मेलानो भन्ने स्कीन क्यान्सर त्यसलाई पनि उपचार गर्ने गरेका छौं भने शरीरमा आउने सानो सानो खटिराहरु पछि गएर क्यान्सर भएको पनि पाएका छौं । दुबी सम्बन्धी रोग भएकाहरु विगतमा जस्तो चुप लागेर नबसी उपचारका लागि चाँडै नै आउने गर्छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा विगतको भन्दा अहिले छाला सम्बन्धी रोगीहरु सामान्य समस्या देख्ने वित्तिकै आउने क्रममा छन् ।
० छाला रोगबाट बच्नका लागि कस्ता उपायहरु अप्नाउनुपर्छ ?
छाला रोगबाट बच्ने उपाय भन्नाले छालाको रोग अनुसार उपायहरु अप्नाउनुपर्ने हुन्छ । छालामा संक्रमण भएको छ भने समयमै छाला रोग चिकित्सककोमा आई चिकित्सककै आदेश अनुसार एन्टीवायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि, फङ्गल चाहिने हो कि त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा भनेको छालाको रोग लागेकाहरुले अरुलाई सर्नबाट रोक्नका लागि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार सावधानीहरु अप्नाउनुप¥यो । जस्तो फङ्गल इन्फेक्सन हुँदाखरि छालाको रोगीले बेग्लै टावयल प्रयोग गर्ने, अरुसँग धेरै सम्पर्कमा नबस्ने, लुतो जस्तो संक्रमण फैलिने खालको रोग छ भने कसैसँग पनि धेरै सम्पर्कमा नबस्ने जस्ता उपायहरु अप्नाई उपचार गर्नुपर्छ । छाला सम्बन्धी रोग के कारणले लागेको छ, जस्तो चुरोट धेरै खाएका कारणले गर्दा सोलासिस भन्ने जातको रोगहरु हुने हुन्छ । त्यसपछि यसल्ली भनेको चाहिँ नशा सम्बन्धी रोगहरु हो यस्तो रोग भएको अवस्थामा पनि छालालाई समस्या पार्न सक्छ । अर्को रोग भनेको चाहिँ एलर्जीको रोग हो । कसैलाई घामबाट हुने एलर्जी रोग छ भने घामबाट बच्ने उपायहरु अप्नाउनु पर्छ । सनस्क्रीन क्रिमहरु प्रयोग गरेर पनि यसबाट बच्ने उपाय गर्न सकिन्छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । रोग अनुसारको रोकथामको लागि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार त्यही विधिहरु अप्नाउनुपर्छ ।
० छालामा उमेर अनुसार पनि एलर्जीका समस्या देखिन्छ ?
एलर्जीको समस्या यो उमेर त्यो उमेर भन्ने हुँदैन । जसलाई एलर्जी हुने सम्भावना देखिन्छ त्यो भनेको जेनेटेकल्ली जीनबाट प्रोग्रायन हुन्छ । कसैलाई खानाको एलर्जी हुन्छ, कसैलाई औषधीको एलर्जी हुन्छ, कसैलाई बाह्य हावापानीको एलर्जी हुन्छ, जस्तो बोटविरुवाको पातबाट हुन्छ भने कसैलाई घामबाट पनि एलर्जी हुने हुन्छ । धुलो धुवाँ, सिमेन्ट, रंगको पनि एलर्जी हुन्छ । कोही मान्छे रंगको काम गर्ने छ भने त्यसलाई रंगको एलर्जी पनि हुने हुन्छ, निर्माण कार्यमा कार्य गरिरहेकाहरुलाई सिमेन्टको पनि एलर्जी हुन्छ । होलीलगायत विभिन्न कार्यक्रममा अविर प्रयोग गर्दा त्यसले पनि एलर्जी हुने हुन्छ । त्यसको एलर्जी छुट्टै हुन्छ । त्यसकारण एलर्जीमा उमेर भन्दा पनि कुन अकुपेशन पेशा छ त्यसमा भरपर्छ । कुनै—कुनै एलर्जी बच्चाबाट सुरु भई बुढेसकालसम्म पनि हुने गर्छ । जसको परिवारमा एलर्जीको समस्या छ त्यो परिवारमा जन्मिने बच्चाहरुलाई पनि देख्न सकिन्छ ।
० कतिपयलाई उमेरै नपुगी चाउरीपना आउने गर्छ, के कारणले यस्तो हुने गर्छ ?
चाउरीपना दुई किसमको हुन्छ । चिकित्सकीय भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ डायनामिकलाई चाउरिपना भन्छ, अर्को चाहिँ स्ट्याटिक चाउरीपना भन्छ । डायनामिक चाउरीपना भन्नाले चाहिँ अलिकति कम उमेरमा देखिने चाउरीपना हो । जस्तो हामीले हाँस्दाखेरि, ईँ गर्दाखरी, आँखा माथि गर्दाखेरी जुन चाउरीपना देखिन्छ त्यो चाउरीपना चाहिँ डायनामिक चाउरीपना हो । यस्तो चाउरीपनाचाहिँ विशेष गरी घाममा धेरै काम गर्ने मानिसहरु, आफ्नो छालाको केयर नगर्नेहरुमा बढी देखिन्छ । अर्कोचाहिँ स्टाटिक चाउरीपना भन्नाले उमेरको कारणले हुने गर्छ । उमेर बुढो भएसँगै छाला पनि तन्किँदै जान्छ । छालामा हुने सेल, कोष, इलास्टिक, कोलाइजन फाइवर उमेरसँगै त्यसको नोक्सानी अर्थात ह्रास हुँदै जान्छ, त्यसका कारण छालामा चाउरीपना आउने गर्छ, त्यो चाउरीपना चाहिँ स्टाटिक चाउरीपना हो, त्यो चाहिँ हट्दैन । हामीले डायनामिक चाउरीपनालाई चाहिँ उपचार गरी ठिक पार्न सम्भव हुन्छ ।
० डायनामिक चाउरीपनाको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ?
डायनामिक चाउरीपनाबाट बच्ने पहिलो कारण भनेको छालाको हेरचाह राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो शरीरको छालाको मुनी कोलाइजिन वा इलास्टिक फाइवर भन्ने हुन्छ त्यो भनेको पानीसँग सम्बन्धी कुरा हो । छालालाई चिल्लो राख्नुपर्छ, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मोस्टराइज क्रिमहरु लगाउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले हेर्ने गरेका छौं चाउरीपना कस्तो मान्छेमा बढी आउँछ, जस्तो खेतबारीमा काम गर्नेहरुमा बढी देख्ने गर्छौं, किनभने उहाँहरु सिधै घाममा एक्सपोज हुने गर्छन् । घाममै कारण पनि अनुहारमा भएको छालाको भित्रपट्टी इलास्टीक टिसीहरु भन्छौं, क्लोराजिन भन्छौं जसले छालालाई तन्काउने काम गर्छ, त्यसले छालालाई बिगार्ने काम गर्छ, त्यसकारणले चाउरीपना देखिन्छ । चाउरीपना रोक्नको लागि विशेष गरी घामबाट बच्ने, सनस्क्रीन क्रिम नियमित प्रयोग गर्ने, ३०—३५ वर्षको उमेर समूहकाहरु घाममा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्ता उमेर समूहकाहरुले सनस्क्रीन क्रिम प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु । बजारमा सस्तोखाले सनस्क्रीन क्रिम किन नहोस् त्यो नियमित प्रयोग गर्न सकिन्छ । तै पनि कोही—कोहीको चाउरीपना आइहाल्यो भने त्यसको उपचारका लागि चिकित्सकले दिने भनेको मस्टराइजर, सनस्क्रीन क्रिम प्रयोग गर्ने, छालाको हेरचाह गर्ने, कुनै पनि केमिकलहरु प्रयोग नगर्ने सल्लाह दिने हो । कसैकसैले चाहिँ चाउरीपनाले अनुहार विगारेको छ भने त्यसलाई कम गर्न बजारमा बोटक्स भन्ने इन्जेक्सनहरु पनि लगाउने गर्छन् । चाउरीपना हटाउन त्यस्तो विधिहरु पनि अप्नाउन सकिन्छ ।
० इन्जेक्सनबाट चाउरीपना हटाउँदा पछि गएर केही असर गर्छ कि गर्दैन ?
जथाभावी औषधी प्रयोग गर्दा गलत ठाउँमा र गलत तरिकाले इन्जेक्सन प्रयोग गरेको खण्डमा असर त गर्छ । तर, स्पेसलिस्टहरुद्वारा प्रयोग गर्दा खासै असर गर्दैन । तर यो टेम्पोरोरी मात्र हो । यसले लगभग ६ महिनाको लागि काम गर्ने गर्छ । ६ महिनापछि फेरि चाउरीपना देखिँदै जाने गर्छ । यो चाहिँ डायनामिक चाउरीपना भएकाहरुलाई लगाउने गरिन्छ ।
० पाठकलाई भन्नैपर्छ केही छन् कि ?
विशेष गरी हाम्रो समाजमा घर, फार्मेसीदेखि लिएर छरछिमेकमा सबै छालाको डाक्टर छन् । छालामा यो समस्या आयो भने यसो गर्नु, उसो गर्नु भन्ने हाम्रो संस्कार नै रहेको छ । कतिपय व्यूटीपार्लर, फार्मेसीहरुमा जथाभावी औषधीहरु प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसपछि ठिक नभएर लामो समय वितिसकेपछि मात्र छालाका रोगीहरु चिकित्सककोमा आउने गर्छन् । त्यसकारण छालाको रोगलाई सुनेको र भनेको भरमा औषधी प्रयोग नगरौं, अस्पताल गई छाला रोग विशेषज्ञकोमा जाँच गराउने र सरसल्लाह लिने बानी बसालौं । अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा कुष्ठ रोग निर्मुल जस्तो लागे पनि यो रोग अहिले पनि कतिपयलाई लाग्दै आइरहेको छ । यस सम्बन्धी हामीहरुले खोजतलास गरी रोग पत्ता लगाउने कार्य गरिरहेका छौं । कुष्ठ रोगको विषयलाई लिएर नेपालका अधिकांश जिल्लाहरुमा जाँचपड्ताल गर्दा कुष्ठरोगीहरु देखिने क्रममा नै छ । कुष्ठरोगका कारण मान्छे अंगभंग हुने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा मात्र कुष्ठरोग पत्ता लाग्ने गरेको छ, यो सारै नराम्रो पक्ष हो ।त्यसैले शरीरको कुनै पनि ठाउँमा लाटोखालको दागहरु भयो भने छाला झमझम भयो भने छाला रोग विशेषज्ञहरुकोमा चेक जाँच गराई हाल्नुपर्ने हुन्छ । छालामा लामो समयसम्म चिलाउने अन्य खालका समस्याहरु छन् भने त्यस्तो खालको रोग खतरनाक पनि हुन सक्छ, छाला त हो भनी त्यसै वेवास्ता गर्नु हुँदैन, छालाबाटै पनि शरीरको भित्री रोगहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ । छाला सम्बन्धी रोग भनेर हेर्दा कसैकसैको मृगौला, फोक्सो, कलेजो आदिको रोगका कारण पनि छालामा लक्षणहरु देख्न सकिन्छ । कतिपय विरामीको त हत्केला हेरेरै पेटको क्यान्सर भएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । शरीरमा भएको अन्य रोगका कारण पनि छालामा समस्याहरु देख्न सकिने भएका कारण छालामा समस्या देख्ने वित्तिकै छाला रोग विशेषज्ञकोमा चेकजाँच गराउन म आग्रह गर्छु भने अर्को कुरा चाहिँ डाक्टरको सल्लाहविना जथाभावी रुपमा कुनै पनि औषधी सेवन नगर्नसमेत म आग्रह गर्दछु ।